Momba anay - Staba Electric Co., Ltd.
Manolora vokatra feno
feno feno AVR, UPS, Inverter ary Transformers
Mihoatra ny 20 patanty famoronana am-boalohany manerantany ho an'ny vokatra herinaratra
Fivarotana firenena & faritra mihoatra ny 60, atolotry ny marika malaza
Laharana 5 ambony
Mpanamboatra 5 ambony an'ny vokatra AVR any Shina 350 mpiasa, faritra famokarana 40,000 misy fitaovana avo lenta
Kalitao sy fanaterana voaporofo
Orinasa ISO9001: 2015 & IMPS GB / T29490-2013 dingana voamarina sy fitantanana Strict QC
Vola miditra amin'ny orinasa
Staba Electric Co., Ltd.. dia naorina tamin'ny 2010, any Zhongshan, Sina-ny foibem-pitateran'ny Guangdong-Hong Kong-Marco Greater Bay Area. Staba dia mpanamboatra lehibe indrindra amin'ny indostria ary koa marika malaza momba ny vahaolana elektrika sy elektronika OEM malaza eran'izao tontolo izao. Ny vokatray lehibe indrindra dia ny Stabilizers mandeha ho azy (AVR), ny famatsiana herinaratra tsy tapaka (UPS), ny inverters / ny Solar Inverters, ny motera DC tsy misy borosy kely sy salantsalany, ny maodelin'ny fanaraha-maso ny motera BLDC, sns.
Staba dia manana trano 43.000 sqm an'ny orinasa maoderina namboarina ho azy, miaraka amina tadim-pamokarana fotodrafitrasa famokarana:
- Fitaovana kabinetra vy sy atrik'orinasa,
- Atrikasa fikorontanana sy fanamafisam-peo ataon'ny vy fanodinana,
- atrikasa fanodinana sy fanandramana Transformer,
- atrikasa fanodinana sy fanandramana PCB,
- atrikasa môtô BLDC,
- Atrikasa fanangonana farany sy fanandramana farany ny vokatra famatsiana herinaratra.
Ny famokarana isan-taona dia mahatratra 50 tapitrisa pcs. Ny vokatray dia amidy amina firenena sy faritra maherin'ny 68 manerana an'izao tontolo izao Ny ankamaroan'ny mpanjifanay dia marika malaza eran-tany. Tamin'ny taona 2019, Staba dia voafidy ho orinasa ohatra amin'ny National Export Leader Index.
Nandritra ny fivoarana dia nandinika tsara ny fanangonana ny zon'ny fananana ara-tsaina sy ny fametrahana rafitra fitantanana orinasa i Staba. Staba no orinasa voalohany eto amin'ny faritra misy anay izay nandany ny fankatoavana ny IPMS an'ny GB / T29490-2013, manana patanty famoronana 4 tany Etazonia sy tany amin'ny Vondrona eropeana, ary mihoatra ny 58 ireo patanty famoronana tany Sina tany am-boalohany sy ireo patanty modely azo ampiasaina. Hatramin'ny 2014, nankatoavina / nekena indray i Staba ho orinasam-pampandrosoana avo lenta intelo nisesy, manana ivon-teknolojia roa izahay: Ivotoerana teknikan'ny teknolojia angovo ho an'ny herinaratra ao amin'ny faritanin'i Guangdong, ary ivon-teknolojia teknikan'ny herinaratra any Zhongshan. Hatramin'ny andro voalohany niorenany, ny rafitry ny rindrambaiko ERP ary ny rafi-pitantanana ISO9001 dia nampiharina tamin'ny lafiny rehetra amin'ny fitantanana orinasa, miantoka ny fandefasana sy ny fahombiazan'ny rafitra. Amin'izao fotoana izao dia manana mpiasa 340 izahay, ka ny 33 amin'ireo dia ho an'ny rafitra R&D ary 38 ho an'ny rafitra fitantanana orinasa. Mandritra izany fotoana izany dia manana fiaraha-miasa matotra sy fiaraha-miasa amin'ny consultative amin'ireo andrimpanjakana fikarohana sy manampahaizana manokana amin'ny indostria izahay, manandrana manao ny vokatray, ny serivisinay ary ny haitao eo alohan'ilay indostria.
Staba dia orinasa iray mitarika lanja, izay ny sanda ifotony dia ny fahombiazana lehibe, ny fanavaozana ary ny mpanjifa. Izy io dia noho ny fahombiazany avo lenta izay ahazoan'ny Staba valisoa ambonimbony kokoa noho ny mpiara-miasa aminy mba hahafahan'ny loharano sy tombony bebe kokoa ampidirina ao amin'ny R&D mba hiarovana ny tombom-barotra ifotony an'i Staba haharitra; Ny fanavaozana dia fikolokoloana ny maha-olona, ​​ny aingam-panahy rehetra nataon'i Staba dia avy amin'ny fanampiana ireo mpandray anjara amin'ny fomba fitehirizana loharanon-karena sy hahatsapa ho tsara kokoa amin'ny dingan'ny famolavolana - famokarana - fantsona - fifandraisana amin'ny mpanjifa; ny an'ny mpanjifa dia taratry ny fihetsik'i Staba manoloana ny hafanan'ny serivisy sy ny serivisy mandritra ny fizotrany.
Omeo fotsiny izahay hevitra momba ny fanaraha-maso moto sy ny motera, dia hanome vahaolana feno sy motera tonga lafatra ilainao izahay. Manantena ny fiaraha-miasa aminao!
Manomboha toy ny orinasa kely, mifantoha amin'ny Voltage Stabilizer & UPS
Mpamatsy tokana azo antoka an'ny Pepsi Cola ho an'ny stabilite volturage
Atrikasa vaovao misy 8000 m² lany ISO9001 voamarina Nanangana ny rindrina fanamafisam-peo voalohany manerantany Voltage Stabilizer
Granded China National Hi-tech Enterprise voamarina
Voasokajy ho mpamokatra haitao ambony indrindra an'ny China Voltage Stabilizer
Nanangana ny Stabilizer TOSIKARAT karazana Triac
Manomboka manangana zaridaina indostrialy 40000m²
Nomena mari-pankasitrahana Teknolojika fikarohana vaovao momba ny herinaratra any Guangdong
Staba Industrial Park dia nampiasaina, avo roa heny ny fahafahan'ny famokarana.
Rafitra fitantanana zon'ny fananana ara-tsaina ara-tsaina GB / T29490- 2013 voamarina
Niorina ny Staba BLDC Motor Division
Niorina ny orinasa PCBA & Small Home Appliances Solution
Motor, Vacuum Cleaner, BLDC Fan Motor, BLDC Motor, Brushless DC Motor, Motor tsy misy borosy, fangatahana pricelist